जनकदीपको निर्देशनमा ‘के यो माया हो’ (भिडियो) « THULOPARDA.COM
जनकदीपको निर्देशनमा ‘के यो माया हो’ (भिडियो)
‘के यो माया हो’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । रोमन बज्राचार्यको शब्द रचना तथा संगीत रहेको गीतमा अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएकी आरती श्रेष्ठको आवाज सुन्न सकिन्छ ।
भिडियोलाई जनकदीप पराजुलीले निर्देशन गरेका हुन् । जनकदीप चलचित्र तथा म्युजिक भिडियोमा परिचित नाम हो । भिडियो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले फरक कन्सेप्टमा तयार पारिएको भिडियोलाई स्रोता तथा दर्शकले रुचाउने विश्वास व्यक्त गरे । गीतको भिडियोमा रोजि पन्त र निर्जन थापाले मोडलिङ्ग गरेका छन् ।
उनको यो पहिलो नेपाली म्यूजिक भिडियो हो । यसअघि रोजिले एउटा हिन्दी भिडियोमा मोडलिङ गरिसकेको बताइन् । उनले विदेशमा रहेपनि नेपाली कला क्षेत्रमा आफूलाई अगाडि बढाउने रुचि रहेको बताइन् । उनको अपोजिटमा मोडलिङ गरेका निर्जन नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा परिचित अनुहार हो । उनले सधै आफूले राम्रो काम गर्ने प्रयास गर्ने गरेको बताए ।
भिडियो सार्वजनिक कार्यक्रममा चलचित्र निर्देशक देवकुमार श्रेष्ठले समेत शुभकामना दिएका थिए । उनले भिडियो आफूलाई सार्है सुन्दर लागेको प्रतिक्रिया दिए । ‘भिडियो नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गरिएको रहेछ। हेर्दा आँखालाई आनन्द लाग्यो’, उनले भने ।
ओ. एम. जी इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा भिमराज रसाईली, सिर्जना लोहागुन र सरस्वती गौतमले भिडियोमा लगानी गरेका हुन्। भक्तपुर दरवार स्क्वायर र नयाँ बानेश्वरका रमणीय स्थानमा छायांकन गरिएको भिडियोलाई रणधीर श्रेष्ठले क्यामेरामा कैद गरेका हुन् । भिडियो सम्पादनको जिम्मेवारी भने धुर्बराज पराजुली ‘प्रज्जवलित’ ले निर्वाह गरेका छन् ।